မန္တလေးမြို့၊ မရမ်းခြံဆိပ်ကမ်းမှာ မန္တလေး- ဗန်းမော် ပြေးဆွဲနေတဲ့ ခရီးသည်တင် မော်တော်တစ်စီး ဒီကနေ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက် ခရီးသည် ၈ ဦး ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်သူက တင်ပြထားပါတယ်။
OIC (ခေါ်) အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လေ့လာမယ့် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့က နေရာ ၂ နေရာမှာ ဒီကနေ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ထွန်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
တောင်ကြီး ၂ဝ၁၃ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲ
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့မှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွက် တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာ(၁၀) ရက် မနေ့ကစပြီး ကျင်းပနေပါပြီ။ အပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သူ မခင်ခင်အိက တင်ပြထားပါတ
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး NLD လူထုတွေ့ဆုံပွဲ
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မလား၊ အသစ် ပြန်လည်ရေးဆွဲမလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူထုသဘောထားရယူတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို NLD ရန်ကုန်တိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစီးပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန် အားကစားကွင်းမှာ မနေ့ညနေက ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်သားဖြစ်မှု ဥပဒေ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် မွတ်စလင် လူဦးရေစာရင်းကောက်ခံမှုကို ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက စစ်တွေမြို့က မွတ်စလင်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ရပ်မိရပ်ဖတွေကို ဒီကနေ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းထောက် ကိုမင်းသိန်းအောင်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကျောင်းသားဘဝနဲ့ ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ ထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးနောက် ပညာဆက်လက်သင်ကြားဖို့ အခက်အခဲတွေကြားက ကြိုးစားရုန်းကန်ကြရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပြီးစီးတဲ့ သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေ ပြဿနာတွေကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ သဝဏ်လွှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "လယ်ယာမြေနဲ့ အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင်" အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သဘောထားတွေကို RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးသန့်ခိုင်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (ရုံးခွဲ) က မြန်မာ့စီးပွားရေးလေ့လာတဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂- ၂ဝ၁၃ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ ၆. ၅ % အထိ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးပညာရှင် Khwima Nthara (ခွီးမား နဿရာ) နဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါ်မေသက်ဇင် တို့ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုဝင်းနိုင်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးခွဲမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို မတရားသင်းအဖြစ် ကြေညာပြီး အဲဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်သူတွေလို့ သံသယရှိသူတွေကို အရေးယူခဲ့တဲ့ မတရားသင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ (၁) (၂) ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ သင့်မသင့်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို RFA သတင်းထောက် ကိုသီဟထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ "မှတ်မှတ်သားသား စကားများ" အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်း တင်ပြထားပါတယ်။
အစိုးရက လျှပ်စစ်မီတာခတွေ တိုးမြင့်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ် ကန့်ကွက်ကြသူတွေဟာ ဖယောင်းတိုင်မီးတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီလောက်က ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်း ကားမှတ်တိုင်အနီးကနေ အလုံမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်ရုံးအရှေ့အထိ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ကလလတ နယ်ခြားစောင့်တပ် လေးနှစ်ပြည့်
ကရင်နီပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (ကလလတ) ရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သူ မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတခါ RFA ရေဒီယို အသံလွှင့် အစီအစဉ်ကနေ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ "ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" အစီအစဉ်ထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဖြေကြားချက်တချို့ကို ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးခင်မောင်စိုးက စီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ပုဒ်မ ၁၈ ဖျက်မလား၊ ပြင်မလား
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပုဒ်မ ၁၈ ကို ဖျက်သိမ်းသင့်သလား၊ ပြင်ဆင်သင့်သလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့ပေါင်း ၂ဝ ကျော်စုဝေးပြီး ရန်ကုန် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်က ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ ရုံးခန်းမှာ မနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုသီဟထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
၅၈ ကြိမ်မြောက် ကရင်ပြည်နယ်နေ့
၅၈ ကြိမ်မြောက် ကရင်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားကို ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့မှာ ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လေ့လာပြီး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရမယ့် အချိန်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးက သက်တမ်းတစ်လ တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အပေါ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးသန့်ခိုင်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက အိမ်သုံးနဲ့ လုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်မီတာခတွေ တိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်တဲ့အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ Generation youth အဖွဲ့ဝင်တွေ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားအနီးမှာ မနေ့ ညနေပိုင်းက ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၂ဝ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၇
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို လာရောက်လေ့လာတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ "မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီ" ကပါတီဝင်တွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ခေတ္တရပ်နားချိန်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးဇော်ကိုက တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးတင်ထွန်း (နတ်မောက်) ဈာပန
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးတင်ထွန်း (နတ်မောက်) ရဲ့ ဈာပနကို မနေ့က ရေဝေးသုဿန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဈာပနကို ရန်ကုန်မြို့က တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်တွေ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ထွန်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် စစ်တွေလူထု တွေ့ဆုံပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာ ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုမင်းသိန်းအောင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီး သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
လိုင်ဇာနဲ့ မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေအကြား ဒီလ နိုဝင်ဘာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုစိုင်းထွန်းအောင်လွင်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
မွန် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေ ထိမ်းသိမ်းရေး ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခု ရေးဆွဲဖို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ဝိုင်းတော်သူ မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
မကွေးတိုင်းအတွင်းက မြေအသိမ်းခံရသူတွေနဲ့ လယ်ယာလုပ်ငန်းအဆင်မပြေတဲ့ လယ်သမားတွေဟာ စားဝတ်နေရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မင်းလှမြို့နယ်က ရေနံမှော်တွေမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုဇော်တူးက တင်ပြထားပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အုန်းချောကျေးရွာက ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းဟာ ကလေးအတော်များများကို အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မရတနာဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မီတီနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဟာ ဒီနေ့ ပြီးဆုံးပါပြီ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေအချက် ၆ ချက်ပါတဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်မျိုးမင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ-ရိုဟင်ဂျာ အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ Holocaust ပြတိုက်မှာ နိုဝင်ဘာလ(၄)ရက် မနေ့က ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ တက်ရောက်ပြောကြားသူတွေထဲက ဗြိတိန်အခြေစိုက် "မြန်မာ-ရိုဟင်ဂျာ အစည်းအရုံး" ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းခင်ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
The Plight of Burma’s Rohingya ဆွေးနွေးပွဲ
"မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး အခက်အခဲများ" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ... The Plight of Burma's Rohingya ဆွေးနွေးပွဲကို မနေ့ညပိုင်းက ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က Holocaust Museum ပြတိုက်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်း ဆွေးနွေးပွဲ (နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဆောင်ပြီး ပညာရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ကျင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သား မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
ပျူမြိုဟောင်းသုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာနဲ့ ဟန်လင်း မြို့ဟောင်းတွေကို သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA ဆောင်းပါးရှင် ရှင်ဒေဝီက တင်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းတွေမှာ ရခိုင်ဖတ်စာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို စပြီးသင်ကြားနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုမင်းသိန်းအောင်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။